Kulanka Djabouti 2 wuxuu noqon doonaa mid adag oo jilbaha la isku aasto!!! Ma jirto is-makeeki iyo meel dambe oo lagu gabbadaa!!! W/Q Cali Xaruuri
Kulanka Djabouti 2 wuxuu noqon doonaa mid adag oo jilbaha la isku aasto!!! Ma jirto is-makeeki iyo meel dambe oo lagu gabbadaa!!! W/Q Cali Xaruuri
Wednesday March 07, 2018 - 17:31:22 in by Samiir Cabdi
Wada hadaladan dabadad dheeraaday waxay soo taxnaayeen tan iyo 2012-2018,
waxayna haatan galeen sannadkii 6aad. Waa xukuumaddii saddexaad ee Somaliya ee wada-xaajoodka ka qeyb gasha iyo xukuumaddii labaad ee dhanka Somaliland. Ma jirto illaa hadda isu soo dhawaansho muuqda oo ku saabsan in uu heshiis rasmi ah dhexmaro Somaliland iyo Somaliya oo wax la isla meel dhigo.
1. Balan-ka-bixii iyo iyo fulin la’aantii heshiisyadii hore sida kii Hawada, deeqaha beni’aadamino iyo mashaariicda dib u dhiska iwm.
2. Dhanka kale waxaa la filayaa in lagu soo qaado xiisadda amni iyo siyaasadeed ee dhawaan ka soo cusboonaatay xudduudda labada dal.
Sida lagu wada haddii uu wada-hadalkani hore u sii socdo waxa la rajaynayaa in loo gunda dego nuxurka wada-xaajoodka iyo qaddiyadda masiiriga ah ee loo ballansanaa kuwaas oo ay udub dhexaad U yihiin qodobadani:-
Waxa la caddeeyey in Dalka Turkiga laga soo wareejiyey wada-hadaladii Somaliland/Somaliya, waxana lagu sababeeyey in mowqifka Turkigu yahay Somaliweyn sidaa daraadeedna aanu dhexdhexaad ka noqon karin wada-xaajoodka. Laakiin dawladda Djabouti ee kulankan mari gelinaysa lafteeda ayaa si aan gabbasho lahayn u aaminsan midnimadii lagu hungoobay ee lagu kala dhaqaaqay. Waxana xusid mudan in Madaxweyne Cumar Geelleh uu aragtidiisa si cad u dhiibtay oo uu yidhi "Annagu talo walaal haddaannu dhiibanno waxannu leenahay "DADKU SIDIISII HORE HA ISKU AHAADO”. Mudane Geellleh garaadkiisa ayuu hadlay, balse waa in la ogaado in aayo-ka-tashigga shacbigu yahay MID AAN LAGA HOR IMAAN KARIN.